NK | पत्रकार श्री ५ होर? : मन्त्री बाँस्कोटा
पत्रकार श्री ५ होर? : मन्त्री बाँस्कोटा
आफू पनि पत्रकारिता पृष्ठभूमिबाटै आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले कुरा बुझेपछि पत्रकार महासंघले आन्दोलन फिर्ता फिर्ता लिएको बताए। महासंघले नेकपाको राष्ट्रियसभाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता पछि आन्दोलन स्थगित गरेको थियो।
सरकार पुरानो प्रणालीबाट नयाँमा जान चाहेकाले अहिले सरकारका काममा अलमलजस्तो देखिएको उनले दाबी गरे।